शैय्या चाहिए यी नम्बरमा फोन गर्नुस् ! : RajdhaniDaily.com
Home Editor-Picks शैय्या चाहिए यी नम्बरमा फोन गर्नुस् !
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि शैय्या चाहिएमा टोलफ्रि नं ११३३ एवं मोबाइल नम्बर ९८५१२५५८३७ र ९८५१२५५८३९ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी बिरामीका लागि शय्या चाहिएमा वा अस्पताल जान परेमा ती टोलफ्रि र मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो । ती नम्बरमा फोन गरे शय्या उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । चौबिसै घण्टा ती नम्बरमा फोन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
असोज २० गतेदेखी दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ प्रस्ताव, सीट बराबर यात्रु राख्न व्यवसायीको माग
काठमाडाैं । काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले असोज २० गतेबाट सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन प्रस्ताव गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि विभागले...
कुरी-कुरी राजधानी समाचारदाता - June 15, 2021 0
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - November 6, 2020 0
वासिङ्टन । केही प्रतिस्पर्धा रहने भनिएका स्थानहरूको मतगणना पूरा हुँदासम्ममा अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्राथमिक निर्वाचनको नतीजा शुक्रबार बिहान सन्तुलित अवस्थामा आएको छ । अमेरिकी नेटवर्क प्रक्षेपणका...
अक्सिजन प्लान्ट र एचडियुका लागि अर्थमन्त्रालयले दियाे १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ
अर्थ राजधानी समाचारदाता - May 21, 2021 0
काठमाडौं । १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ...
कावासोती ३३/११ केभिए सवस्टेसन ट्रान्सर्फरमरको स्तरउन्नती
अर्थ राजधानी समाचारदाता - December 10, 2020 0
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित कावासोती ३३/११ केभिए सवस्टेसन ट्रान्सर्फरमर स्तरउन्नती एवं निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पिटिएसडि प्रोजेक्ट अन्तर्गत आरके इन्टरनेसल...
प्रदेश ७ राजधानी समाचारदाता - May 13, 2020 0
प्रवास राजधानी समाचारदाता - June 1, 2021 0
प्रवास राजधानी समाचारदाता - March 9, 2021 0
गाेवा । प्रगतिशील नेपाली समाज समिति भारत माहाराष्ट्र राज्य समितिको आयोजनामा १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाएको छ । धनसरी ददेलको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रम,...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - April 20, 2020 0
वीरगन्ज । नागरिकलाई बचाउन लकडाउन भइरहेको समयमा लकडाउनको दूरुपयोग गर्दै बन बिनासमा साथ दिने प्रमाण सहित पक्राउ परेका छन् । जंगलमा मात्र पाइने सतिसालको...